प्रकाश सपुतको “गल्बन्दी”ले कती कमायो? एभिन्युज टि.भीमा पुगेर यसो भने: – Gulminews
Home/मनोरन्जन/प्रकाश सपुतको “गल्बन्दी”ले कती कमायो? एभिन्युज टि.भीमा पुगेर यसो भने:
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ जेष्ठ ३१, शुक्रबार ०२:३६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । युट्युबमा तहल्का मच्चाइरहेका छन्, प्रकाश सपुतले । दुई सातामै उनको लोकदोहोरी गीत ‘गलबन्दी’ ले तेस्रो हप्ता पुग्नै लाग्दा १ करोड २ लाख माथि भ्युज पाईसकेको छ । वर्ष दिनअघि उनको ‘बोल माया’ गीत पनि यस्तै हिट बनेको थियो।
गीतको चर्चासँगै हाल यो गीत चोरिएको गीत हो भन्ने आरोप पनि सुन्नमा आएको छ । यस बिषयमा प्रकाश सपुत र शान्ति श्री परियारले मुख खोलेका छन् । गीत कसरी छायाँकन भयो ? कसरी यति सफल भयो ? लगायतका बिविध कुराहरु खुलाउँदै प्रकाशले युटुबबाट हालसम्म यो गीतले कति कमायो भन्ने रहस्य पनि खोलेका छन् । भिडियो हेर्नुस: